Blatter: Vane Chekuita neKubhejwa kweMitambo yeNhabvu kuAsia Ngavasungwe
Chikunguru 05, 2011
FIFA president Joseph S. Blatter smiles before the start of a friendly match between the Senegalese club team Dakar and the Palestinian refugee camp team from Amari, in the West Bank town of Aram, near Ramallah, Sunday, May 15, 2011. Blatter said Sunday h
Sangano rinomirira mutambo wenhabvu pasi rose re FIFA, rinoti richabatsira ZIFA kuti igadzirise mabatiro ayo nyaya dzemari, kuitira kuti ZIFA ive sangano rine chiremera.
Fifa inotiwo inoda kuti vatambi vakawanikwa vaine mhosva yekutengeswa kwemitambo ku Asia, vadzingwe munhabvu zvachose. Izvi zvataurwa neChipiri nemutungamiri we Fifa, Va Joseph Sepp Blatter, avo vanga vari muZimbabwe.
VaBlatter, avo vanga vachishanya muZimbabwe, vati vakaita hurukuro neZifa, pamusoro pemabatiro ayo nyaya dzemari, vakati Fifa ichaita zvose zvainokwanisa kuita kuitira kuti ibatsire Zifa.
Mashoko aVaBlatter anotevera musangano wakaitwa pakati pavo, nemunyori mukuru weFifa, VaJerome Valcke, pamwe nebhodhi reZifa.
Asi VaBlatter vati ivo vari kuda kutanga vaona hwaro huchashandiswa neZifa mukushandisa mari yavari kuda kubatsirwa nayo ne Fifa. Sangano re Fifa rinoti harisi kufara nemashandisirwo akaitwa dzimwe mari dzarakapa Zifa mumakore mashoma apfuura.
VaBlatter vaudza ruzhinji rweZimbabwe kuti vatambi venhabvu vese pamwe nevatungamiri vavo vachawanikwa vaine mhoswa mukutengeswa kwemitambo kuAsia vachadzingwa munhabvu zvachose uyezve havazotenderwa kuonekwa vachiita zvenhabvu kunyange yepasi pasi.
VaBlatter vabuda pachena kuti vatambi ava vanofanira kutanga vabatwa nemhosva munyika mavo kuti veFifa Ethics Committee vazokwanisa kutonga nyaya iyi.
Vatambi vakawanda vemuZimbabwe pamwe nevatungamiri vavo vari kuongororwa kuti vakabhadharwa mazimari mazhinji nevanoita zvekubheja nhabvu sezvinoitwa mabhiza kuti chikwata che Zimbabwe Warriors chikundwe zvinonyadzisa apo chaishanya kuAsia.
VaBlatter vati vapinzawo mapurisa epasi rose e interpol pamwe neimwe kambani yeFifa inongorora nyaya dzakadai kuti vaferefete zvakaitika.
Mune imwewo nyaya chikwata chenhabvu chemaMighty Warriors chakunda chikwata cheMozambique 3-0 pamutambo weCosafa Women’s Tournament watambirwa kunhandare ye Gwanzura neChipiri masikati.
Murairidzi wechikwata ichi, Muzvare Rose Mugadza, vanoti vari kufadzwa nekutamba kuri kuita chikwata chavo uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kukunda Tanzania neChina mumutambo wema semi-finals.
Vari kutarisira kutora mukombe wegore rino. Muzvare Mugadza vanoti chikwata chavo chichatamba nesimba kuti chibudirire pamitambo inotevera.
Hurukuro naRose Mugadza
Hurukuro naMuzvare Rose Mugadza